'2019 Hungary Grand Prix' esemokwu ya na akụkụ gbara agba - RayHaber
HomeỤWAEurope36 Hungary'2019 Grand Prix nke Hungary'
02 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 36 Hungary, Europe, ỤWA, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire 0
ọgụ nke jupụtara n'ọgba bọọlụ siri ike
Imirikiti ndị ọkwọ ụgbọ ala abanyela ọrụ ha; Hungaroring nwere ọtụtụ ụzọ dị nkọ n'akụkụ Budapest na-echetara gị ụbọchị ndị ahụ n'ihi na ọ bụ ụzọ kachasị ala na-agbacha ọsọ.
Agbanyeghị, nke a apụtaghị ịdị mma maka taya n'ihi na bends ndị a anaghị enye mgwakota agwa ohere izu ike. Pirelli na-atụ aro C2 siri ike, C3 ọkara na taya C4 taya n'etiti usoro maka agbụrụ Hungary. Hungaroring nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke bends, ọtụtụ na-egbu oge na ntanetị. Nke a pụtara na taya na-aga n’ihu n’enweghi ohere iji jụọ oyi.
Okpomoku nke oge ugbu a na Hungaroring so na ihe kachasi nma nke oge. Nke a abụghị naanị na-eme ka ejiji na-emetụta ikuku, mana ọ na-emekwa ka ọ sie ike maka ndị ọkwọ ụgbọ elu, dịka ọsọ ọsọ dị ala (ọ bụkwa n'ihi ọnọdụ ala nke Hungaroring track na olulu) pụtara na enweghi ikuku ikuku n'ime ụgbọ ala ahụ.
Uwe na akwa nke taya dị obere. Enwere ike ịsị na taya ndị ahụ ewepụtara afọ a ka ha dị ka afọ gara aga mgbe ahọpụtara ndị na-acha odo odo dị larịị 2018 dị nro. C2 taya (nke siri ike na Hungary) dị obere karịa karịa 2018 isi ma a na-eji ya ọbụlagodi mgbe ọ tụrụ aro dịka nhọrọ siri ike. Na itoolu nke 11 Grand Prix ruo ugbu a, ihe niile mgwakota agwa a tụrụ aro ka ejiri mee ihe n'ọsọ.
Ugbo agha jiri ike di elu merie otutu agba n’usoro n’agha, mana njigide taya ndi ozo bu ihe di nkpa na uzo Hungaroring.
Atụmatụ mmeri gara aga nke afọ gara aga bụ naanị nkwụsị olulu, na onye ọkwọ ụgbọ ala Mercedes Lewis Hamilton 25. Na apata ụkwụ (70 na mkpokọta), ọ gbanwere site na nke dị nro gaa roba dị nro ma ọ dịghị mgbe ọ bụla ejiri mgwakota agwa siri ike mee ihe. Onye ọkwọ ụgbọ ala Ferrari Sebastian Vettel, onye gụsịrị nke abụọ, si na nro gaa n'okporo ụzọ dị nro, site na usoro atụmatụ nkwụsị ọzọ, ebe onye otu Kimi Raikkonen rụchara nke atọ na nkwụsị olulu abụọ. Ya mere, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri atọ mbụ mere atụmatụ atọ dị iche iche.
Ihe ndekọ apata ụkwụ ka bụ nke Michael Schumacher, ma agbajikwa ya kemgbe 2004. Ka anyị lee ma ànyị ga-ahụ ka ị kwụsịrị n'izu a.
MARIO ISOLA - PRESIDENT OF F1 NA CAR RACES
"Hungary bụ Grand Prix ikpeazụ tupu ezumike ọdịnala, ma bụrụ ihe ịma aka siri ike ịkọwa akụkụ mbụ nke oge yana anụ ahụ na usoro. Ingga n'ihu ụgbọala n'ihi mkpụmkpụ nke okporo ụzọ chọrọ nkà dị ukwuu na enwere nsogbu nke ịdapụ n'okporo ụzọ. Yabụ, ọnọdụ dị n'ụzọ ahụ dị oke mkpa na atụmatụ ahụ ịha ikari. N'aka nke ọzọ, dịka anyị hụworo ọtụtụ oge n'oge gara aga, enwere ihe ịtụnanya na usoro Hungaroring na atụmatụ ziri ezi na nke kachasị ọsọ ọsọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị ọsọ. N'afọ gara aga, mgbe anyị tụrụ aro taya otu afọ a, anyị hụrụ ọtụtụ usoro ịgba ọsọ dị iche iche mgbe ọkwa mmiri metụtara. Anyị na-atụ anya ịhụ otu atụmatụ dị iche iche na ngwụsị izu a. ”
Finnish Pilot Bottas Focuses na British Grand Prix 02 / 07 / 2019 Na 2017, onye ọkwọ ụgbọala Finnish jikọtara Silver Arrows (aha njirimara nke ìgwè ndị Mercedes-Benz). O mechara nke atọ na Austrian Grand Prix na Sunday ikpeazụ ma na-elekwasị anya na British Grand Prix nke ndị otu ga-eso. Onye na-akụ Finnish Valtteri Bottas meriri abụọ n'ime oghere mmeghe nke oge a. Ndị ọzọ abụọ meriri site na Mercedes-AMG Petronas Motorsport onye ọlụlụ, onye mọnk Monster Energy Lewis Hamilton. Lewis, onye na-agba ụwa ugbu a, na-enweta isii n'ime agbụrụ itoolu ma na-eduga agbụrụ ahụ n'ihu. Valtteri maara ugbu a na ọ ghaghị itinye aka na ihe ịga nke ọma nke onye òtù ọlụlụ ya ma ọ bụrụ na ọ chọghị ịnọ n'azụ. Ịkwadebe maka BRITISH GRAND PRIX Izu gara aga ...
Pirelli na-eweta Ụdị Ngwá Ahịa 1 nke Kasị Mkpa maka Ọnụ Na-agba ọsọ nke UK Grand Prix! 13 / 07 / 2019 N'afọ a, Pirelli na-eweta ihe atọ kachasị ike nke usoro ahụ na agba Silverstone: White hard, Yellow medium and Red soft for the third time after Bahrain and Spain. Ebumnuche bụ iji nweta ike dị elu nke ọsọ ọsọ ọsọ a na-agba ọsọ na Britain. Egwuregwu Silverstone, ebe mbụ Grand Championship nke ụwa mere banyere 70 afọ gara aga, bụ otu n'ime ọkacha mmasị kachasị mmasị nke motorsport. Egwuregwu dị iche iche Na ngwa ngwa ngwa na-akọwa usoro oku Silverstone, a na-ejikwa ike dị elu na-ebugharị taya mgbe niile, karịsịa na Maggots, Becketts na Chapel, ebe ndị ọkwọ ụgbọelu niile ga-abanye na ya. Nsonaazụ dị elu ...
Onye isi oche nke DHMI Hüseyin Keskin họpụtara! Ọnye na-bụ Hüseyin Keskin? 27 / 07 / 2019 A họpụtara Hüseyin Keskin General Manager na Onye isi oche na Board of Directors of State ọdụ ụgbọ elu State (DHMİ). 25 July Mkpebi Onye Isi Obodo bipụtara na Official Gazette nke akara 2019 ma gụọ 30842 gụrụ dị ka ndị a: ọ e kenyere. " ISnye bụ HUSEYIN KESKIN? Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị Pertevniyal, Maazị Keskin gụsịrị akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na Ngalaba mgbakọ na mwepụ ya na Mahadum Boğaziçi wee nweta akara ugo mmụta nna ya ukwu na Ngalaba Nchịkwa Azụmaahịa na Mahadum Marmara. Keskin na-aga n'ihu n'ihe ọmụmụ doctoral ya na akaụntụ na ego. Aviation ...
Ụgbọ njem Ụgbọ njem 2018I zuru ezu 07 / 01 / 2019 Ụgbọ njem, nke bụ enyemaka nke obodo Kocaeli Metropolitan Municipality, na-aga n'ihu na-eto eto na 2018. Ụgbọ njem nke na-enye ndị ọrụ na-elekọta mmadụ ọha na eze na Kocaeli ndị mmadụ na 2018; ndị na-anya ụgbọ ala nke ndị amaala na ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike inweta ekele na ịkwanyere ihe nlereanya nke ụmụ amaala. TransportationPark nọgidere na-eme ihe ndị a na-akụzi na 2018 ma debe ndị ọrụ ọkwọ ụgbọ ala niile. Ya mere, ihe mgbaru ọsọ nke ịhụ na ụmụ amaala nwere ike ịgakwu udo ma dị jụụ. AKWỤKWỌ NDỊ ỤBỌRỤ ỤBỤRỤ ENN 13816 yol TransportationPark ejirila ọrụ nke ụgbọ ala intercity na Kocaeli mee njem ọtụtụ puku ndị njem ka ha jiri ụgbọ ala ahụ dị mma, dị ọcha, dị ọcha ...
Ụlọ Ụmụaka IMM, afọ abụọ ga-ezu 18 / 01 / 2019 Obodo nke Istanbul Metropolitan Assembly Assembly kwadebere usoro ihe omume maka ndị òtù ya n'ihi nkwụsịtụ nke izu ụka. Ọtụtụ narị ụmụaka ga-ekere òkè na mmemme, nleta ngosi ihe ngosi nka, ụgbọ mmiri na-aga, ihe omume egwuregwu na Ottoman Archive ga-abụ mmemme njem. Mgbakọ Ụmụaka, bụ nke na-aga n'ihu na ọrụ ya n'ime Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Youth and Sports, na-ahazi usoro ihe omume maka ụmụ akwụkwọ iji jiri oge ezumike ha. Ndị otu Mgbakọ nke ụmụaka ga-amalite ọrụ ezumike ha n'oge a na ahụmahụ ice na-agba agba na İBB Silivrikapı Ice Rink. N'oge ihe omume 9, ụmụ akwụkwọ ga-enwe obi ụtọ nke ịnwụ na ice site n'ịmụ ihe site n'aka ndị nkụzi ọkachamara. Ndị òtù nke Mgbakọ Ụmụaka IMM na-etinye aka na omenala omume etkinlik
Minista Turan: "2019 Afọ ga-abụ afọ ọrụ jupụtara na ọrụ" 01 / 01 / 2019 Mehmet Cahit Turan, Minister of Transport and Infrastructure, onye nyere ozi banyere afọ ọhụrụ, kwuru, sị: "Achọrọ m ịme ememme ọhụrụ nke mba anyị, mba anyị na mmadụ dum; 2019 bụ otu afọ nke mere nnukwu ọrụ ndị anyị malitere tupu e mechaa rụọ ọrụ nke ọma n'agbanyeghị na akụmokwu akụ na ụba na nke ọpụpụ, nke mbụ nke Istanbul Airport malitere na 2018 October. Ovit Mountain, nke jikọrọ 29 bin 2 altitude Ov
Anyị chọrọ afọ ọhụrụ nke obi ụtọ dịka ezinụlọ RayHABER 31 / 12 / 2014 Anyị chọrọ afọ ọhụrụ nke obi ụtọ dịka ezinụlọ RayHABER: 2014 ga-ahapụ anyị na mwute anyị na ọṅụ anyị. 2015 nwere olile anya, nwekwuo obi ụtọ, na-eweta obi ụtọ karịa ụwa dum. Oge dị mma ná ndụ gị, obi ụtọ, ezi ọbụbụenyi na-anọnyere gị mgbe niile. Na 2015, anyị na-achọ ka ị dịrị ndụ na nkasi obi nke ụgbọ okporo ígwè dị elu na-achọ ka ị nwee afọ ọhụrụ obi ụtọ, ahụike na obi ụtọ, ọṅụ, ihe ịga nke ọma, ọtụtụ ego, ịhụnanya na udo. Family bụ mpako rayhab ndị ịbanye 26.000 ozi ọma n'isiokwu, na 25 puku ọbịa kwa ụbọchị, anyị bụ ndị mbụ 4 puku saịtị na Alexa rankings na Turkey. Daalụ ọzọ. Obi Ụtọ Afọ Ọhụrụ!
MESOB President Keskin welitere okwu banyere Ụlọ ọrụ Wagon 21 / 04 / 2015 MESOB President Keskin kwalitere Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Wagon: Ụlọ ọrụ "Wagon Factory" nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bulitere tupu nhoputa ndi ochichi MESOB bu President Şevket Keskin n'ihu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. President MESOB President Şevket Keskin welitere okwu nke V Wagon Factory, bụ nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bulitere tupu ntuli aka ọ bụla tupu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'okwu ya edere banyere ụlọ ọrụ wagon, Keskin hapụrụ ire ere ụlọ ọrụ wagon nke ebe a na-ahapụ ndị mmadụ ka ha weghachiri onwe ha na TCDD 5. O kwuru na a ga-akwaga ebe a na-ahụ maka mpaghara mpaghara na mpaghara niile nke ụlọ ọrụ a. Keskin kwuru, ler Ndị na-eche Malatya mgbe 50 afọ ekwesịghị ịhụ obiọma a na obodo a ukwuu "...
Oge Hesse Keskin na ọdụ ụgbọ elu nke atọ 10 / 08 / 2016 Oge nke Keskin Hüseyin n'ọdụ ụgbọ elu nke atọ: Hüseyin Keskin, bụ aha a maara aha ụgbọelu ahụ, ghọrọ Chief Executive Officer nke İGA Airport Management A.Ş. 25 Hüseyin Keskin, onye malitere ịrụ ọrụ n'August, kere òkè na ọrụ dị mkpa na mpaghara ụgbọelu. Turkish Airlines President na Business Location na-agba ọsọ dị ka Turkey nnukwu azụmahịa ụlọ ọrụ TGS ebe ke Constituent General Directorate na Keskin, karị tupu e họpụtara ka HDI Airport; TAV Park General Directorate, Secretary General nke IDO, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka TAV Na-achịkwa Senslu Board
Hüseyin Keskin, 3. ụgbọ elu ahụ ga-aga njem enyi 22 / 10 / 2016 Hüseyin Keskin, 3. Ọdụ ụgbọ elu ga-abụ enyi enyi: Istanbul New Airport amalitela imeghe ọnụ ụzọ ya na ụgbọ elu n'ime usoro nke ịkwadebe ọrụ. Istanbul New Airport, nke ga-enwe utu aha 'ọdụ ụgbọelu kachasị elu' site na ncha 'mgbe a na-etinye ya n'ọrụ, amalitela ịmeghe ọnụ ụzọ ya maka ụgbọelu n'ime usoro ọrụ nhazi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-akwado mgbasa ozi maka ụlọ ọrụ ndị na-eji ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ ahụ achọpụta ihe. Hüseyin Keskin, onye isi oche nke İGA Airport Management, onye na-arụsi ọrụ ike itinye ọdụ ụgbọ elu na-eje ozi na 2018, kwuru na Habertürk maka oge mbụ. New ...
Finnish Pilot Bottas Focuses na British Grand Prix
Pirelli na-eweta Ụdị Ngwá Ahịa 1 nke Kasị Mkpa maka Ọnụ Na-agba ọsọ nke UK Grand Prix!
Minista Turan: "2019 Afọ ga-abụ afọ ọrụ jupụtara na ọrụ"
Anyị chọrọ afọ ọhụrụ nke obi ụtọ dịka ezinụlọ RayHABER
MESOB President Keskin welitere okwu banyere Ụlọ ọrụ Wagon
Oge Hesse Keskin na ọdụ ụgbọ elu nke atọ
Hüseyin Keskin, 3. ụgbọ elu ahụ ga-aga njem enyi